I-China OMASKA Ibhegi yeDiaper iBag enePad yokuTshintsha eZiphathekayo Enkulu ye-Unisex yeeBag zaBantwana eziNyulo ezininzi zokuHamba emva kwePakethi yooMama uTata #HS2015-2 uMenzi kunye noMboneleli | Omaska
OMASKA Diaper Bag Bag ...
Omaska ​​dipaer ubhaka womfazi...
OMASKAIfashi ezininzi ezisebenzayo...
OMASKA amanzi asebenzayo...
I-OMASKA Diaper Bag Bag enePad yokuTshintsha ephathwayo Enkulu yeUnisex yeeBag zaBantwana eziNyulo ezininzi zokuHamba ngasemva koMama bakaTata #HS2015-2
Inombolo yomthetho: HS2015-2
Ubungakanani: 26.0 × 20.0 × 46.0CM
I-Lining: I-210D i-polyester
Iipcs ezingama-30 ngebhokisi, ubukhulu bebhokisi 50x60x70CM, 18.5kgs kwibhokisi nganye
Iodolo ye-OEM/ODM (ilogo yenzelwe wena)
Yamkela i-SKD (I-Semi-Knocked Down) iodolo
I-50% T / T njengediphozithi, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa
Ibhegi kaMama yenzelwe ngokukodwa kwaye iveliselwa lula ukukhathalela iintsana kunye nabantwana abancinci. Iimveliso zeentsana, abantwana abancinci kunye noomama bafakwa engxoweni ngokwahlukeneyo ukunika lula koomama ukuba bakhuphe abantwana babo.
Ukusetyenziswa Ukuhamba/iLaptop/Mihla/uShishino Ukupakishwa kweMveliso (1)Ibhegi yePP+ibhokisi(2)Inokwenziwa ngokwezifiso
Ixesha lexabiso EXW, FOB, CNF,CIF,DDU, njl Immimiselo yokuhlawula T/T, Western Union, L/C
Izibuko lokuLayisha ETIANJIN, ETSHAYINA Iinkcukacha zokuThunyelwa Ngolwandle/ngomoya/ngomhlaba/express
Ixesha lokukhokela iSample 1. oobhaka eziqhelekileyo: 3-9 iintsuku Ixesha lokuKhokela kwiMveliso 500-1000 : 20-25 iintsuku
1K-5K: 25-35 iintsuku
5K-30K: 35-45 iintsuku
2.obhaka obunzima: 9-14days > 30K: ngaphezu kweentsuku ezingama-45
oobhaka abantsonkothileyo: mabaxoxwe ngokwahlukeneyo
1) Top 10 R&D oriented umenzi of oobhaka abakrelekrele
I-2) iminyaka engama-21 umenzi ozinikele ekuphuhliseni oobhaka abakrelekrele
3) I-MOQ encinci yokuxhasa abathengi abatsha
4) ukuhanjiswa ngokukhawuleza ASAP
OMASKA BRAND INTSHAYELELO
Ifilosofi yoshishino ye-OMASKA: Ngeqonga lethu lokwanelisa abantu abaninzi Ngeemveliso zethu ukuze kuxhamle abathengi abaninzi
Umoya weshishini:Ukwenza yonke imveliso ngononophelo
Umsebenzi wethu:Ukwenza uhambo lube lulaUkuba ngoyena mthengisi ubalaseleyo wemithwalo kunye nobhaka
1) Iqela lobuchwephesha eliza kukusebenzela: kudala ndisebenzela amashishini ayi-1580
1) Ukusebenza kakuhle: iiyure ze-8 zesampulu kunye neentsuku ezi-7 zokuhanjiswa kweempahla (kungekudala)
2) iintsuku ezi-3 uhlaziyo olunye lwenkqubela yomyalelo.
3)Impendulo ye-imeyile kwiiyure ezi-3 (ixesha lokusebenza).
4)Yenza iisampuli de waneliseke.
5) Ukubonelela ngeshedyuli yemveliso kunye neefoto ukugcina uhlaziywa malunga nemeko yemveliso.
6) Isampuli yenqanawa yokukhangela phambi kokuveliswa kobuninzi.
7) Ukuhanjiswa kwangexesha kuqinisekisiwe.
1) iintsuku ezili-15 ixesha demurral umgangatho.
2) iintsuku ezingama-365 isiqinisekiso sotshintshiselwano lweempahla.
3)Nika isikhokelo sokuthengisa.
4) Rhoqo ngekota, ukuqaliswa kwemveliso enye.
Umbuzo: Bubuphi ubuncinci be-odolo yakho ye-backpack?
A: I-MOQ yi-600pcs / design, kodwa siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuxhasa ukuba ngaphantsi kwe-600pcs / design.Ngombala okanye ipateni, ngokuqhelekileyo i-MOQ yi-300pcs / umbala (umzekelo).
Umbuzo: Luluphi uhlobo lolwazi olufanele lubonelelwe ukuba ndifuna ixabiso / ukucaphula kwi-backpack?
A: Ubungakanani bomyalelo, ilogo eLungisiweyo kunye nezinye iimfuno, ixesha leXabiso (EXW, FOB, CIF njl.) kunye nezinye iimfuno ukuba unayo.
Umbuzo: Ngaba unokwenza ubhaka ngokwendlela yethu yoyilo okanye iisampulu?
A: Ewe, singakwazi ukubonelela ngeenkonzo ze-OEM okanye ze-ODM ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi, sinamava atyebileyo nabuchwephesha ngokulungelelanisiweyo, ngoko sinako ngokupheleleyo ukwenza imveliso ngokuyilwa kwakho okanye iisampulu, kwaye unike iingcebiso zokunceda. inkampani yakho ukusombulula imibuzo yobungcali okanye iingxaki ezinxulumene.
Q: Zeziphi izinto eziluncedo kwi-OSKA yakho yesutikheyisi kunye nefektri yobhaka?
A:Iimveliso zethu zenziwe ngemathiriyeli yokhuselo lokusingqongileyo;
Iqela lobuchwephesha elikhonze 1,250 iinkampani brand / abasasazi / abathengisi bonke ukuba bakukhonze;
Isampula yokuhanjiswa kweeyure ze-8 kunye neentsuku ezi-7 zokuhanjiswa kwempahla;
Nge-15 iminyaka yamava yobungcali ekuyileni iimveliso bag ezikrelekrele.
Q:Asinalo uyilo lwethu lobhaka. Ngaba unokwamkela iodolo yeODM ?
A: Ewe, sineqela loyilo elinamava atyebileyo kuyilo lweengxowa ezinobhaka, ngoko ke sinokubonelela ngenkonzo ye-ODM ngokweemfuno zabathengi kodwa iindleko zoyilo ezifanelekileyo zobhaka kufuneka zihlawulwe.
Q: Ndingayifumana isampuli kabhaka ukuze ndijongwe?
A: Ewe, akukho ngxaki. Singabonelela ngeesampulu zobhaka.
Umbuzo: Lithini ixesha lokuhlawula?
Q:Iphi i-OSKA yakho yesutikheyisi kunye nefektri yobhaka?
A: wethu OMASKA isutikheyisi kunye nefektri yobhaka ibekwe eBaigou, eTshayina.
Ngaphambili: Umzi-mveliso wasimahla wesampulu yaseTshayina Ubhaka-Ilogo yeSiko lomgangatho ophezulu weshishini
Okulandelayo: I-Omaska ​​Diaper Bag BackpackMultifunction Waterproof Travel Back Pack yabasetyhini#BRD262
Ibhegi yeDiyaper enePad yokuTshintsha ephathwayo
Multipurpose Travel Back Pack for Moms
I-OMASKA YENZA Ilogo ye-OEM HS810 FACTORY DIRECTL...
I-OMASKA YENZA I-LOGO YE-OEM HS810 IFKHITHI NGOKUNQOPHILEYO KWI-WALLALEALE FASHION UYILO OMKHULU OMKHULU OMKHULU WOBUKHIPHA OBUNGQINA AMANZI OKUNGXELELA UKUZONWABISA Ngaba ubhaka oyi-20l mkhulu ngokwaneleyo ukuba angangena esikolweni? Ubhaka wesikolo onomthamo ophakathi kwe-15 kunye ne-20 yeelitha mkhulu ngokwaneleyo. Ezi bhaka zixinene, kodwa zihlala zineendawo ezongezelelweyo zokugcina isixhobo sokubala, iipeni kunye nezitshixo. Kukwakho nentaphane yeebhegi ezincinci ezinelaptop kunye negumbi letafile. Yintoni i...
2020 Ubhaka oSongwayo oMtsha ophathwayo weUltralight W...
Ulwazi lweMveliso ekhoyo umbala: Mnyama, okwesibhakabhaka, oluhlaza, orenji, ongwevu. dark.blue, l.blue ubukhulu Product 34 * 20 * 55CM Ubunzima Item 0.38KGS Gross Weight 0.48KGS Department unisex-abadala ILogo Omaska ​​okanye Customized logo Item imodeli Inombolo RW531# MOQ 50pcs ngombala Best abathengisi Rank 18007#, 1801 #, 8774 #, 023#,1901# Iwaranti kunye neNkxaso yeWaranti yeMveliso: unyaka o-1 ka-2020 iBag yokuSonga eNtsha eSongwayo ephathwayo iUltralight Waterproof Outdoor Multifunction Storage Folding Bag
OMASKA 2021 uyilo lwefashoni whoelsale HS2036 Mama...
Ulwazi ngeMveliso efumanekayo ngombala: ************* Inqaku lenqaku: HS2036# Ubukhulu: 26x18x41CM NW: 0.60 KGS GW: 0.62 KGS ISebe: unisex-abadala Ilogo: Omaska ​​okanye Customized logo MOQ 600 pcs Best Inqanaba labathengisi HS2036 # Iwaranti kunye neNkxaso yeWaranti yeMveliso: unyaka om-1 OMASKA 2021 uyilo lweFashion design whoelsale HS2036 Mommy Baby Backpack
Canton Fair OMASKA OEM ODM ishishini manzi...
Ubungakanani bemveliso 50 * 31 * 14CM Ubunzima bento 0.7KGS Umbala weGrey Black Blue Ukupakisha Ibhegi enye yepp bag nganye, 35pcs kwikhathoni enye, ubungakanani bebhokisi 50 * 60 * 70cm ILogo Omaska ​​okanye inombolo yelogo eLungisiweyo 004 MOQ 100 PCS Best Sellers Rank USB Ukutshaja i-Port Reflective Strip Warranty & Support iWaranti yeMveliso: unyaka omnye
I-Omaska ​​yokunyuka ubhaka 60L Umthamo omkhulu wamanzi...
Indlela yokukhetha i-backpack yangaphandle? Okokuqala, ngokomthamo wakho wokuthwala (ukuthwala ubunzima) kunye neemfuno zokusebenzisa, ezifana nomgama wokuhamba, ixesha, njl., khetha ukuba ungakanani ubhaka owufunayo Emva koko kukho ukhetho lokusebenza: ukungangeni kwamanzi, ukunxiba, umbala, izinto eziphathekayo, nokuba uyilo lwenkqubo yokuthwala lukhululekile kwaye lunengqiqo, nokuba kukho isibiyeli sangaphakathi, njl.
Isiko lomthamo omkhulu weblue print polyester scho...
Ulwazi ngeMveliso efumanekayo ngombala: Mnyama, ngwevu, Ubungakanani beMveliso eBlue 32*15*50CM Ubunzima bento 0.7 KGS Ubunzima obuGqibeleleyo 0.8 KGS yeSebe unisex-abadala ILogo Omaska ​​okanye Logo Customized Item imodeli inombolo 1928# MOQ 500 PCS Best Sellers, 1805# Rank 1805 # Isikhundla , 1811#, 8774#, 023#,1901# Iwaranti & Inkxaso Product Warranty: 1 unyaka Custom enkulu umthamo blue ubhaka laptop polyester yesikolo